०७२ को बदला लिने व्यग्रता « Naya Page
काठमाडौं, ५ असार । संसद्को दुई तिहाइसहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन सकेनन् । तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन् ।
संसद् विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरूलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिलसिलेबार रूपमा खारेज गर्दै आएको छ । यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ ? नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त यसमा ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन् ।
नेपालमा अलोकप्रिय र निरंकुश सरकारको पक्ष लिएको र समर्थन गरेको भन्ने जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलिएका धारणालाई भारत सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझ पुगेर हटाउनु पर्दछ । शान्तिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक चासो हो । यस दिशामा भएका सबै प्रयासलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्नु आवश्यक छ ।
पूर्व विदेशसचिव श्याम शरण, २९ मे, द इन्डियन एक्सप्रेस
वर्तमान समयमा, काठमाडौंमा (पूरै नेपालमा होइन) राजनीतिक र आमधारणा व्याप्त छ, ओली अहिले भारतको मनपर्दा छन्, उनले भारत सरकारलाई वचन दिएका छन् कि उनले नेपालमा राजतन्त्रको मातहतमा हिन्दूराष्ट्र फर्काउने छन् र चीनलाई पर राख्ने छन् । कोही दाबी गर्छन् कि भारत नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन लागिरहेको छ ।
केही आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ) र भिएचपी (विश्व हिन्दू परिषद्) नेताहरूले यसलाई अपरिवर्तनीय प्रमाणका रूपमा राजतन्त्र फर्काउनेमा समर्थन गरिरहेका छन् । हालै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नी कोमलको हरिद्वारस्थित कुम्भ मेलामा भएको भ्रमणले यो अड्कललाई गति दिएको छ । भारत सरकारले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा मौनता राखेको छ र यो ठीक छ । तर, यो मौनताचाहिँ अब भारतको उच्चतम हित केमा हुन्छ भन्नेमा भारतले सही आकलन गरेको छैन भन्ने रूपमा हुनु हुँदैन ।
पूर्व राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी, २९ मे, ट्रिब्युन इन्डिया
पूर्व राजदूत राकेश सुद, २७ मे, द हिन्दु
नेपालमा राजनीतिक अनिश्चितता जारी रहने स्पष्ट छ । भारतले परम्परागत रूपमा नेपालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिकतालाई समर्थन गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा भारत सक्रिय रूपमा सबै राजनीतिक पक्षहरूसँग संवादमा रहनु आवश्यक छ । साथसाथै यो पनि महत्पूर्ण छ कि भारत नेपालको कुुनै पनि समूहसँग पक्षपाती छ भन्ने कुरासँग बच्नु पर्दछ ।
भारतका पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, इन्डिया एन्ड एसियन नेइवरहुड पुस्तकमा
भारतीय कूटनीतिज्ञका यस्ता विचार अखबारका ओप–एडमा मात्र होइन, विभिन्न बहस कार्यक्रममा पनि अभिव्यक्त भइरहेका छन् । दुवैतिरका कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरातसम्म वार्ता गरेर जे मार्गचित्र बनाएका थिए, अहिले नेपाल त्यतैतर्फ गइरहेको छ ।
त्यसको गन्तव्य नेपालका राजनीतिक दुर्घटना होला र छिमेकमा अस्थिरता प्रवद्र्धन गरेको आरोप भारतमाथि आउला भनेर त्यहाँका कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूको विश्लेषणमा भारतको शक्तिमा नेपाली सत्ताले अघि बढाएको यो खेलले संवैधानिक संकट आउनेछ त्यसले ०७२ मा जारी नयाँ संविधानले संस्थागत गरेका ढाँचा जोखिमा पार्नेछ । ०७२ को संविधानमाथि भारतीय संस्थापनको अनुदार नजर छर्लंगै छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमाथि चासो राख्दै आएका एक कूटनीतिज्ञले कम्तीमा पाँचवटा चासोसहित भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हात हालेको छ । उनी भन्छन्, ‘पहिलो– संविधान जारी गर्दा भारतको असन्तुष्टि थियो । यतिसम्म कि नाकाबन्दी गरेको थियो । भारतको समर्थनविना बनेको संविधान टिकाउ हुँदैन भन्ने स्थापित गर्ने उसको चाहना हो ।
दोस्रो– भारत हिन्दू राष्ट्र बनाउन र त्यसैका आधारमा भारतबाट पनि धर्मनिरपेक्षता हटाउन धरातल तयार पार्न चाहन्छ । तेस्रो– नेपालमा चिनियाँ प्रवाह रोक्ने भारतको योजना छ । चौथो– नेपालमा वामपन्थी जनमत कमजोर पार्ने भारतको अर्को योजना छ । र, पाँचौँ भारतले प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई सन्देश दिएको छ, त्यो भनेको उनीहरूले ०७७ को वैशाखमा नै ओलीलाई हटाउन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।’
मधेसीका मागप्रति अनुदार प्रधानमन्त्री ओली अहिले उनीहरूको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न तयार छन्, कार्यदल नै बनाएका छन् । नेपालको संविधान संशोधन गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने हो, तर यति संवेदनशील विषयमा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गरेका छन् ।
त्यस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तीन वर्ष रोकेर सरकारले संसद् विघटनलगत्तै त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मै छलफल गर्न र उपयुक्त कानुन बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदाललते नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ ।
यता नदी तथा वन क्षेत्र दोहनको विषयमा विरोध भइरहेको वेला सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरी विदेशमा निकासी गर्ने नीति बजेटबाटै ल्यायो । बजेटमा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भनी लेखिएको छ ।
यद्यपि, भारतलाई खुसी पार्न नेपालको वातावरण विनाश गर्न खोजिएको भनेर नेपालमा तीव्र विरोध मात्र भएन, सरकारको नीति घातक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदाललते नै ढुंगा, गिटी निकासी रोक्न आदेश दिइसकेको छ ।
एकपछि अर्को घटना चिन्ताजनक भएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति पनि आएको छ । उनीहरूको भनाइ छ, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । र, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।’
उता, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भने ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियतामा एक इन्च पनि सम्झौता नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा ठोस विषय र मुद्दा केही पनि देखिँदैन । त्यसमा केही आधार छैन । आफ्नो राष्ट्रिय अडान, सार्वभौमिकताका र भौगोलिक अखण्डताका विषय वा हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न नदिने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ गल्ती भयो भनेर ठोस रूपमा आउनुपर्‍यो नि !’ उनी भन्छन्, ‘जिम्मेवार ठाउँमा पुगिसकेका, मुलुक चलाइसकेका र भोलि फेरि मुलुक चलाउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक र वस्तुगत रूपमा बोल्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले कुनै पक्ष वा निश्चित राष्ट्रलाई इंगित नगरेको दाबी गर्छन् । ‘नेपालमा जब केपी ओलीजीको सरकार बन्यो, त्यहीवेलाबाट बाह्य हस्तक्षेप र चलखेल बढेको हो । र, यसमा मुख्य दोष पनि उहाँकै छ । उहाँ जनताका अघिल्तिर चर्को राष्ट्रियताको नारा लगाउने र विदेशीसँग लुरुक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति देखाउनु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले राष्ट्रिय हित र स्वार्थका कुरालाई छाडेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति अपनाउनु भएको छ । जसका कारण हरेक कुरामा विदेशीको चासो र चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका र नियतमाथि विपक्षीले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ६ वैशाखमा नेपाल विद्यार्थी संघको ५२औं स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै देउवाले भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि पुगिसकेको टिप्पणी गरेका थिए ।
‘हिजो सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनेर, भारतविरुद्ध नारा लगाएर चुनाव जितेका ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेका छन् । कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद ? यिनीहरू राष्ट्रवादी पनि होइनन् । खालि ‘अपरचुनिस्ट’ मात्रै हुन्,’ उनको भनाइ थियो ।
पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा ठोस विषय र मुद्दा केही पनि देखिँदैन । त्यसमा केही आधार छैन । आफ्नो राष्ट्रिय अडान, सार्वभौमिकताका र भौगोलिक अखण्डताका विषय वा हाम्रा आन्तरिक मामलाहरूमा हस्तक्षेप गर्न नदिने विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट कहाँ गल्ती भयो भनेर ठोस रूपमा आउनुप¥यो नि ! जिम्मेवार ठाउँमा पुगिसकेका, मुलुक चलाइसकेका र भोलि फेरि मुलुक चलाउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक र वस्तुगत रूपमा बोल्दा उपयुक्त हुन्छ ।
होइन भने गलत सन्देश जनतामा जान्छ र यसले अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्छ । ठोस केही भएको छ भने त्यसमाथि छलफल गरेर टुंग्याउन नसकिने कुनै विषय हुँदैन, छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो कार्यकाल होस् वा यो कार्यकाल, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कहीँ–कतै पनि एक इन्च तलमाथि हुन दिइएको छैन ।
बरु हिजो नउठाइएको कतिपय विषय अहिले उहाँको कार्यकालमा उठेका छन् । ती विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर पहल भइरहेको छ । तर, हुँदै नभएका कुराहरू गरेर आन्तरिक विषयलाई बाह्य मुलुकसँग जोड्नु उचित होइन । उहाँहरू नै हो जसले हिजो नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुभयो, विदेशमा गएर बस्नुभयो । यहाँ सरकार कस्तो बन्नुपर्छ भनेर दिल्लीमा राय माग्न जाने पनि उहाँहरू नै हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकाले त्यस्ता शैलीमा विश्वास मान्दैनन्, गर्दैनन् । छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण र सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने यो सरकारको नीति छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट